Dhaamsa Hidhamtoota Siyaasaa Mana Hidhaa Qiliinxoo Irraa Dhufe
[SQ Amajjii 28/2022]
Hidhamtoota siyaasaa Oromoo maqaa 'Shanee' jedhamuun manni murtii Fedeeraala hidhamtoota siyaasaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman keessaa namoota saddeet (8) irratti murtiin dabaa hidhaa cimaa waggaa ja'aa hanga waggaa ja'aa fi ji'a ja'aa irrattii darbuun ni yaadatama.
Yeroo ammaa kana ammoo hidhamtoota siyaasaa kun namni biraa fuudhamee ajjeefamuu waan amaleefatameef sodaa lubbuu oolfachuuf jecha gara naannoo dhaloota isaanitti iyyachaa turani. Bu'uuruma iyyata isaaniin manni murtii Federaalaas rakkoo nageenya hamaa keessatti argamuun isaanii amansiisaadha jechuun mana hidhaa bakka dhalootaa isaanitti akka gaggeefaman ajajee jira. Manni hidhaa Qiliinxoo kun garuu ajaja mana murtii kabajuu dhiisuun seeraa ala manuma hidhaa Qiliinxoo keessa tursiiseera.
Hidhamtootni siyaasaa namoonni saddeettan kun rakkoo nageenyaa lubbuu isaaniif wabii dhabuu karaa miseensota poolisii sabaan Amaara ta'anii fi hidhamtoota biraa sabaan Amaaraa ta'anii irraa gahaa tureera. Ammas gaafa guyyaa 18/05/2014 A.L.H'tti hidhaamtootni siyaasaa "miseensa Shanee ajjeefna" jechuun wal gurmeessuun mana hidhaamtootni siyaasaa Oromoo jiran kanatti seenuun walakkaa waraanuun walakkaa immoo buruqsuun miidhaa hamaa irraan gahaniru.
Haaluma kanaan hidhaamtootni kun itti gaafatamtoota mana hidhichaa dhimmichi ilaalaa jiru Komander Ballaxaa Mogas jedhamuu fi Inspeekter Taayyee Moges jedhamanitti gaafa iyyatan, "isin miseensota Shaneef gara laafinni hin jiru. Bakka duuriyyoonni isin ajjeessanitti isin jijjiirra" jechuun yeroo ammaa ifaan ifaatti hidhamtoota kana dararaa jiraachuun dhagaa'ameera.
Hidhamtootni siyaasaa kunneen kanneen maqaan isaanii asii gaditti tarreeffame kana:
1. Toleeraa Aagaa
2. Lalisaa Fiqaaduu
3. Daawwit Muluu
4. Abdii Dafaa
5. Abbaa Seeraa Malkaa Wiirtuu
6. Amaanu'el Beekataa
7. Biqilaa Garbaa
8. Gadaa Roobaa
9. Waggaa Tasfaa akka ta'an odeessi mana hidhaa Qiliinxoo irraa bahe ni addeessa.